सजिलै गर्नुहोस भुइँ स्याउको व्यवसायीक खेती - कृषि पत्रिका
सजिलै गर्नुहोस भुइँ स्याउको व्यवसायीक खेती
डा. टीपी बराकोटी शुक्रबार २४ असोज, २०७६	comments
यो फल नेपाली हावापानीमा सजिलै हुर्काउन सकिने, बजारमा माग भएको र ओखतीजन्य भएकाले यसको व्यावसायिक खेती विस्तार गर्न सबै सरोकारवालाहरु लागि परेको देखिन्छ।
जाँगरिला युवा कृषकका लागि नेपालमा थोरै लगानीमा धेरै आम्दानी दिने बालीहरू छन् । पैसा कमाउन विदेशै जानुपर्छ भन्ने छैन । मनपरेको बाली छनोट गरी ज्ञान, सीप र प्रविधि उपयोग गरे राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ ।
याकोन दक्षिण अमेरिकाबाट फैलिएको बहुवर्षीय वनस्पति हो । बोट १–२ मिटर अग्लो र ठाडो हुन्छ, पातहरू ठूला र लाम्चा हुन्छन् । फूल सूर्यमुखीको जस्तै हुन्छ । जरा वरिपरि सखरकन्द जस्तै लाम्चा गाना लाग्छन्, जुन रसिलो र गुलियो हुन्छ । अलिअलि स्याउको जस्तो बास्ना आउँछ । त्यसैले यसलाई भुइँ स्याउ पनि भनिन्छ । कन्द (ट्युबर) सुन्तले, गुलावी, वैजनी रङको हुन्छ । सखरकन्द जस्तै देखिने र कार्बोहाइड्रट धेरै हुने भएकाले यसलाई सखरखण्ड स्याउ पनि भन्न सकिन्छ । कन्दलाई सलाद, जुस, तरकारी, औषधी आदि प्रयोजनमा ल्याइएको छ । पातलाई चियाको सट्टा प्रयोग गरिन्छ । धेरै देशले यसलाई औद्योगिक बालीका रूपमा अपनाइरहेका छन् ।
नेपालमा याकोन भित्रिएको तीन दशक भए पनि धेरैलाई यो नौलै छ । एक जापानीले सन् १९८० तिर पहिलोपटक पोखरामा ल्याएका थिए । तर बोक्रा ताछेर खान नजान्नाले एक दशकसम्म खाद्य प्रयोजनमा आउन सकेन । याकोन समशितोष्ण हावापानीमा हुने बाली हो । तापक्रम १५–३० डिग्री सेल्सियस र आर्द्रता ६०–७० प्रतिशत उपयुक्त हुन्छ । १,००० देखि २,५०० मिटरसम्मको क्षेत्रमा खेती गर्न सकिन्छ । पानी जम्ने र सुख्खा जमिन ठिक हुँदैन । धेरै प्रकारको माटोमा हुन्छ, तर बलौटे दोमट र खुकुलो माटो उपयुक्त हुन्छ । प्राङ्गारिक पदार्थ पर्याप्त भएको माटोमा फस्टाउँछ । नेपालको धेरै क्षेत्रको हावापानी र माटो याकोन खेतीको लागि उपयुक्त छ ।
बिउको स्रोत :
याकोन कृषक र व्यवसायी हुन्, जसलाई जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले खोजिदिन सक्छ । एउटा गानो बिउलाई २० देखि ४० रुपैयाँ पर्छ । बोटको वृद्धिसंँगै उत्पादन पनि धेरै दिनसक्ने बाली भएकोले पूर्ण क्षमताको उत्पादन लिन माटोमा खाद्य तत्त्वहरू त्यही अनुसार उपलब्ध हुनुपर्छ । याकोन लगाउने जग्गा राम्रोसंँग जोतखन गरी आलु लगाउनका लागिजस्तै तयार पार्नुपर्छ । त्यसमा २–२ फिटको फरकमा ड्याङ बनाई १ फिट गहिरो र १ फिट चौडा खोपिल्टा खनी १ देखि २ केजी गाई–भैंसीको मल हालेर माटोसंँग मिलाउनुपर्छ । प्रत्येक खोपिल्टोमा राम्रो स्वस्थ एउटा गानो रोपी फेदमा माटोले थिच्नुपर्छ । त्यसपछि माटो भिज्नेगरी पानी हालिदिनुपर्छ । यो चैत–बैसाखमा रोपिन्छ ।
डा. टीपी बराकोटी पुस २९, २०७४ मा लेख्नु भएको कान्तिपुरमा प्रकाशित लेखबाट